Ahoana Raha Ny Media Afrikana No Mitatitra Ny Fifidianana Ao Etazonia Tahaka ny Fomba Fitateran’ny Media Tandrefana An’i Afrika? · Global Voices teny Malagasy
Ahoana Raha Ny Media Afrikana No Mitatitra Ny Fifidianana Ao Etazonia Tahaka ny Fomba Fitateran'ny Media Tandrefana An'i Afrika?
Voadika ny 22 Avrily 2016 5:02 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Pikantsary ny sary navoakan'ny Storyful tao amin'ny Youtube, sarina mpanao fiihetsiketsehana niharan'ny herisetran'ny mpanohana an'i Donald Trump ary nofehezin'ny polisy nandritra ny famoriam-bahoaka tao Carolina Avaratra.
Matetika mampiseho ny kaontinanta amin'ny endrika ratsy na amin'ny fomba tsotsotra ny fitateram-baovao momba an'i Afrika ataon'ny haino aman-jery tandrefana, manasongadina kokoa ny ady, ny kolikoly sy ny fisarahana ara-poko. Saingy tsy manao tahaka izany ny haino aman-jery tandrefana rehefa mitatitra ny firenen'izy ireo tsirairay avy.
Manaraka ny dian'i Joshua Keating tamin'ilay “Raha nitranga tao izany”, andian-tantara ao amin'ny gazetibokim-baovao Amerikana Slate, nanontany tena ilay mpisera Tumblr, Ragamberi hoe: “Ahoana no ho fisehoan'izany, raha ny media Afrikana no nitatitra ny fifidianana ao Etazonia tahaka ny fomba ataon'ny fampitam-baovao tandrefana amin'ny fifidianana ao Afrika sy any an-kafa? “
Nanjary lahatsoratra nitondra ny lohateny hoe: “Raha nitranga teto izany” ny valinteniny. Ireto ny ampahany vitsivitsy mikasika ny fiheverany izay mety ho vakin'ny fitateram-baovaon'ny Afrikana mikasika ny fifidianana filoham-pirenena mampiadihevitra any Etazonia.
Mitombo ao amin'ny fitondrana Obama ny teritery mba hanaiky ireo mpanaramaso sy mpampandry tany iraisam-pirenena taorian'ny fampielezan-kevi-pifidianana voaloton'ny herisetra ara-poko tao amin'ny firenena Amerikana avaratra anjakan'ny korontana.
Tao Addis Ababa, niantso fivoriana maika ny filoha Afrikana mba hitaky ny fiverenan'ny firenena tan-dalàna ao Amerika, taorian'ny fanafihan'ny milisy mpomba ny fitondrana ny fihetsiketsehana nataon'ny mpitarika mpanohitra malaza Donald Trump tao Chicago.
“Raha tsy avelan'i Amerika hanaramaso ny fifidianana ireo vondrona mahaleotena iraisam-pirenena ary hametraka filaminana ny mpampandry tany, dia saritsariny ny fifidianana ary tsy azo lazaina fa malalaka sy madio,” hoy ny vondrona Afrikanina.
Manazava ny fifandonana tamin'ny faran'ny herinandro, nilaza ilay manam-pahaizana manokana momba an'i Amerika – monina ao amin'ny Oniversite Eduardo Mondlane any Maputo, Mozambika, Afrika Atsimon'i Sahara fa manana ady ara-pivavahana sy ara-poko lalina sy niori-paka efa ela ny Illinois izay azo antoka fa hangotraka indray raha tsy manaiky ireo mpampandry tanin'ny Firenena Mikambana alohan'ny fitsapan-kevitra mampifanolana mafy amin'ny Novambra ny fitondran'i Obama.
Imbetsaka nahita fipoahan'ny herisetra tamin'ny famoriam-bahoaka nataony ny kandida Repoblikana Donald Trump. Ho valin'izany, nampiasa herisetra tamin'ny lahateniny sy tao amin'ny media sosialy ihany koa i Trump:
Mandainga i Bernie Sanders raha nilaza fa tsy nasaina handeha any amin'ny hetsika ataoko ireo mpanakorontana avy aminy. Tandremo Bernie, raha tsy izany hankany aminao koa ny mpanohana ahy!
Voaloton'ny tatitra hoso-pifidianana mielim-paratra koa ny fifidianana. Nitaraina momba ny hoso-pifidianana taorian'ny faharesena kely mampiady hevitra tao amin'ny faritra lowa i Sanders, resin'ny antoko mpifanandrina aminy Hillary Clinton, vadin'i Bill mpitondra teo aloha Bill.
Nilaza i Trump tenany fa nisy ny hoso-pifidianana tao amin'ny faritr'i Florida, izay miteraka ahiahy lehibe eo amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena mikasika ny fahatokisana ny fitsapan-kevitra hoavy.
Nandritra ny fifaninanana savaranonando, izay mamaritra ny kandidà hisolo tena ny antoko Demokraty sy Repoblikana amin'ny fifidianana filoham-pirenena, nitopatopa teo amin'ny roa tonta ny fiampangana fisiana hosoka, ary nitaraina amin'ny tsy fahamarinan'ny rafitra ny mpifidy.
Fanafihana ny fahalalahan'ny media
Misy ihany koa ny ahiahy manoloana ny fanafihana miharihary atao amin'ny fahalalahan-gazety. Niampanga ny famelezana mpanao gazety nandritra ny fampielezan-kevitra ny Komity Iraisampirenena ho Fiarovana ny Mpanao gazety.
Mpanao gazetin'ny CBS News no nosamborina raha nitatitra ny fifandonana tao amin'ny famoriam-bahoakan'i Donald Trump tao Chicago tamin'ny volana Martsa. Nesorina avy eo ny fiampangana.
Vakio eto ny lahatsoratra feno.